Scurek Rebula Kumusoro 2016 - Wevino.store
Scurek Rebula Simudza 2016
Ščurek Rebula Simudza 2016
Rebula Kumusoro kwakapfuma, nemafuta emaruva eorenji, apricot, uye michero yakaomeswa. Pane palate, inotapira nezvinonhuwira nevamwe vanilla flavour.
MaWebhu eOrange ane maitiro akatenderera nyika ikozvino. Ndiyo ichangoburwa buzzword mune yehurster yekunwa boka. "Chinhu chakasiyana cheSlovenia newaini yeorenji ndechekuti pane nhoroondo pano, haisi mbiri yemafashoni chete," Beth akawedzera. “Mune mamwe matunhu epasi, vanhu vari kuyedza kuti vagone kuita ganda revachena. Rebula Up ndiyo muenzaniso wakanakisa wewaini yemaranjisi yakanaka - haina kupusa asi inyowani uye ine hutano, saka ndinofunga takasarudza zvakanaka. ”
Waini yeOrange inowana kuumbwa kwavo uye kunhuhwirira kwakapfuma kubva pakusangana kwavo kwenguva refu nematehwe emazambiringa machena.
Makore anopfuura zana nemashanu apfuura Ščurek mhuri yakarima 120 hectare yemizambiringa, ichigadzira makumi mashanu mahekita ewaini. Waini yacho yakatanga kubhowa muna 1 apo iyo Ščurek mhuri iyi vairima mahekita manomwe eminda yemizambiringa uye vachigadzira mabhodhoro 50 ewaini pagore. Nhasi baba Stojan Ščurek (vari pamufananidzo) nevanakomana vavo vashanu uye vanorima mahekita anopfuura makumi maviri eminda yemizambiringa, vamwe vakuru pamakore makumi mashanu neshanu.
Gore rega rega mhuri ye Ščurek inoburitsa mabhodhoro anosvika makumi mapfumbamwe ewaini yemhando yepamusoro yakagadzirwa kubva kumarudzi akasiyana emuno neepasi rose. Ivo vakaramba vakatendeka kune zvinyoro nyowani asi yakazara-mizere uye kunonoka kwekutanga kutumbuka kusvika pakupera kwezuva.
Nhasi Kuchengetedzeka kunogadzira anenge zviuru zana nemazana emabhodhoro ewaini newaini imwe neimwe. Asi panguva yeTito uye yemakomunisti-nguva yeYugoslavia, uye nekuti mhuri yeScurek yanga isiri nhengo dzebato rezvemakomisheni, hurumende yakavarambidza uye vamwe kubva mukubhinya waini yavo. Hurumende yaida kuti vape makumi matatu muzana wemakumi matatu emichero yavo yekukohwehwa mazambiringa kuhurumende kuburikidza nemushandirapamwe wepanzvimbo - ini wandakapfuura munzira ndiri pano, uripo uchiri kushanda asi parizvino.